Mpikatroka Ejipsiana Nahazo Sazy Mihantona Herintaona An-tranomaizina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2014 17:58 GMT
Nahazo sazy mihantona herintaona an-tranomaizina ilay mpikatroka Ejipsiana malaza Alaa Abd El Fattah, sy ny anabaviny Mona Seif, ary folo hafa tamin'ny 5 Janoary noho ilay raharaha naha-voarohirohy azy ireo ho nandoro ny foiben'ny kandidà ho filoham-pirenena teo aloha Ahmed Shafiq. Iray amin'ireo raharaha marobe izay niahiahian'ireo fiarahamonin'ny mpikatroka Ejipsiana sy iraisam-pirenena momba ny valifaty miharihary ataon'ny governemanta amin'ireo mavitrika tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny revolisiona 25 Janoary tao Ejipta tamin'ny 2011 izany.
Tokony ho fotoanan'ny fisedrana hoan'ireo mpikatroka ny sazy mihantona, fa tsy fotoana any am-ponja, saingy mila manaja kosa ny lalàna mandritra izany fotoana izany izy ireo. .
Tsy ireo raharaha roa fanenjehana mpikatroka malaza ao Ejipta ireo ihany no misy ankehitriny. Vao haingana i Ahmed Maher, Ahmed Douma ary Mohamed Adel no nahazo sazy henjana 3 taona asa anterivozona amin'ny raharaha hafa, izay voampanga ho nikarakara fihetsiketsehana tsy nahazoan-dalana ihany koa. Maher no mpanorina ny vondron'ny tanora 6 Aprily, ary i Adel kosa no mpitondra tenin'ny vondrona. Nasaina nandòa onitra 50 000 EGP ($ 7000) tsirairay ihany koa ireo mpikatroka telo ireo, ary hiditra anaty fisedrana (sazy mihantona) mandritra ny telo taona hafa raha fantatra fa meloka. Nampiakatra ny fitsarana eny anivon'ny fitsarana ambony ireo mpikatroka, saingy mbola any am-ponja izy ireo amin'izao fotoana izao.